पत्याउनुहुन्छ? यि राशि भएका युवतिले सधै प्रेममा धो*का दिन्छन् । जानिराख्नुहोस् – Bhindai Kura
पत्याउनुहुन्छ? यि राशि भएका युवतिले सधै प्रेममा धो*का दिन्छन् । जानिराख्नुहोस्
मिथुन राशि मिथुन राशिको मानिसहरूको बारेमा बढीजसो सबै राशिको एक मात्र राय हुन्छ कि यस राशिको महिलाहरू प्रेममा निकै चाँडो पर्दछन् । यस राशिको बारेमा भनिएको छ कि यदि कसैले यिनीहरूसँग केवल एक-पटक मात्र हाँसेर कुरा गरेमा यी राशिका महिलाहरू उनीहरूको प्रेममा पागल हुने गर्छन् । जसको अर्थ यो हुन्छ कि यिनीहरू एक तर्फी प्रेममा निकै चाँडो पर्छन । यसैकारणले यस राशिको अधिकांश मानिस प्रेममा आफ्नो प्रेमीप्रति विश्वासिला सावित हुँदैनन् ।
विवाद मिलाउने प्रयासस्वरुप ओली र नेपालबीच बालुवाटारमा वार्ता